Seed Co yobatsira National Gallery | Kwayedza
16 Nov, 2018 - 00:11	 2018-11-15T09:24:45+00:00 2018-11-16T00:05:13+00:00 0 Views
Muzvare Mutemererwa (kurudyi) vachitambaidza cheki ye$5 000 kuna Mai Sibanda
KAMBANI huru mukuuchika nekutengesa mbeu muZimbabwe, yeSeed Co, nemusi weMuvhuro svondo rino yakapa $5 000 kuchikoro cheNational Gallery of Zimbabwe School of Visual Arts and Design icho chiri kuMbare, muHarare.
Mari iyi ichabatsira muhurongwa hwekuratidzira zvivezwa nemifananidzo kuchaitwa nevadzidzi pakupedza fundo yavo mwedzi unotevera.
Vachitaura pagungano rekupihwa kwemari iyi, mukuru anoona nezvekudyidzana kweSeed Co neveruzhinji, Muzvare Marjorie Mutemererwa, vanoti zvakakosha kubatsira chikoro ichi sezvo sangano iri riri kuita basa guru munyika rekuchengetedza chivanhu, tsika nemagariro kuburikidza nezvivezwa nemifananidzo yakasiyana-siyana.
“SeSeed Co, tinokoshesa nekutenda basa guru riri kuitwa neveNational Gallery. Vana vari kudzidza pachikoro chino kuchengetedza ramangwana renyika kuburikidza nemabasa avari kuita ayo anoratidza tsika nemagariro edu sevanhu vatema.
“Sekambani, tinewo basa guru rekupa rubatsiro kunharaunda uye iri nderimwe remabasa atiri kuita kuvanhu nezvikoro mukusimudzira nyika yedu,” vanodaro.
Vanoenderera mberi vachiti, “Rubatsiro urwu rwunoita kuti vadzidzi vaone kukosha kwemabasa avari kuita pachikoro uye chero pavachazoratidzira zvinhu zvavo nekupihwa magwaro avo ekupedza zvidzidzo zvavo. Tinovimba kuti rubatsiro urwu rwuchabatsira kuti basa nezvinangwa zvechikoro chino zvifambire mberi zvakanaka.”
National Gallery of Zimbabwe director Mai Doreen Sibanda vanotenda Seed Co nerubatsiro urwu vachiti rwuchavabatsira mukuratidzira zvipo kuchaitwa nevadzidzi pakupedza kwavo zvidzidzo.